China Price for Pakistan nipples manjarano electrode orinasa sy ny mpamatsy | vet Energy
Plant & Fitaovana
Manjarano Fanodina & Vane
Manjarano Sheet & Paper
Manjarano Rod & Tube
Manjarano-jaza / Bushing
Manjarano horonan & voanjo
Tsara kalitao orinasa Price manjarano electrode 600mm
China uhp maharitra conductivity manjarano electrode
700mm / 600mm uhp manjarano electrode
Manjarano electrode HP ny vy fototra fandrendrehana metaly
Manjarano electrodes nipples Rp vidiny
Manjarano electrodes amin'ny nipples for Arc fatana fandoroana dia
Price for Pakistan nipples manjarano electrode
Manjarano electrode uhp 500 for eaf
Manjarano electrode sy ny nonon'ny ny fatana fandoroana dia Arc
Manjarano electrode & nipples, tsara Price EDM gr ...
Hot-nivarotra Shina manjarano electrode mpanamboatra vidiny
Manjarano mitondra for lubrication
Manjarano Fanodina Vane for paompy
Solar manjarano Boat for Pecvd
Manjarano electrode fananana / famokarana / mpamokatra
Fampiharana: ampiasaina amin'ny EAF na ny LF, EAF / LF
Grade: UHP (Avo Ultra Power)
Apparent Density (g / cm³): 1.66-1.74
Flexural Hery (N / ㎡): > 8 Mpa
Nonon'ny Type: 3TPI 4TPI 3TPIL 4TPIL
Hiondrika hery: 10.0-16.0Mpa
Ambony: Low Ny fihinana Rate
Raw Material: solitany Coke sy ny fanjaitra Coke
Fanoherana (μΩ.m): 4.5-6.2μΩ-M
Mafana Fanitarana: 1.5-2.9
Ash afa-po: 0.3% Max
Ara-nofo: 100% Nohafarana Needle Coke
Ampahany Density: 1.66-1.74g / cm3
Lasitike MODULUS: 14 GPA Max
manjarano electrode na ny fanaka avo lenta calcined solitany Coke,-dehibe fanjaitra Coke, ary farany arintany asfalta, ny kilasy dia RP, HD (impregnation), HP sy UHP electrodes manjarano, ny famaritana dia Ø75-700mm.
Manjarano electrode novokarin'ny ny orinasa manana ny tombony ny ambany resistivity, elektrika ambony conductivity sy mafana conductivity, tsara oxidation fanoherana, mafana tsara taitra fanoherana, milina avo hery, mora ny milina, sns.
Manjarano electrode no be mpampiasa mba smelt ny vy, firaka vy sy ny metaly na ara-nofo eo amin'ny herinaratra nonmetal Arc memy.
Ny vidin-javatra dia mety miova eo amin'ny tolotra sy ny tsena antony. Dia handefa anareo nohavaozina vidiny lisitra araka ny orinasa mifandray anay Raha mila fanazavana fanampiny.
Eny, isika iraisam-pirenena rehetra mitaky baiko mba manana mitohy mba ambany indrindra dia be.
Fa santionany, ny fe-potoana dia ny 7 andro. Fa bahoaka ny famokarana, ny fe-potoana dia 15-25 andro aorian'ny fandraisana ny fametrahana fandoavam-bola. Ny fitarihana mahomby fotoana rehefa ho efa nandray ny petra-bola, ary ny manana fankatoavana ny farany ho an'ny vokatra. Amin'ny toe-javatra rehetra, Hiezaka isika mba handraisana ny zavatra ilaina. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra isika dia afaka manao izany.
Previous: Manjarano electrode uhp 500 for eaf
Next: Manjarano electrodes amin'ny nipples for Arc fatana fandoroana dia
Hot-nivarotra Shina manjarano electrode manufactur ...
Manjarano electrode fananana / famokarana / Prod ...
No. 777, Zhongguan West Road, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang, 315201, Sina
manjarano hamolavola, manjarano Plate, Manjarano malefaka Ring, manjarano Electrode, manjarano Block, nahatsapa manjarano,